Na mmalite nke oge ọ bụla ọ bụla, otu n'ime ajụjụ ndị bụ isi maka nwa agbọghọ ọ bụla bụ "Olee otú ejiji ugbu a n'ụzọ kwesịrị ekwesị?". A sị ka e kwuwe, ị ga-achọ ka eji eji akwa obi ụtọ ma nwee obi ụtọ na ya. E nwere ọtụtụ ndụmọdụ dị iche iche esi amụta otú e si eji ejiji ejiji, ma n'otu oge ahụ n'ụzọ dị mma ma dị oke ọnụ.
Ọ dị mkpa ịmara na ọ dị mkpa ọ bụghị naanị na ị ga-eji ejiji na ejiji, kama ime ya ngwa ngwa, dị ka mgbe ọ bụla ị chọrọ ịdị njikere maka ihe ọ bụla a na-atụghị anya ya.
Ya mere, anyị na-amụta ijiji ejiji. Ịkwesịrị ịmalite site na iwu ahụ n'ime kaboodu. Echefukwala ịmepụta ngwaahịa site na nkọwa ndị dị otú ahụ banyere uwe ndị kwesịrị ịdị na nso, dịka ọmụmaatụ, bras, panties, tights, wdg. Echiche ọma ọzọ bụ nhazi ụda nchara nke ndabere nke uwe mwụda, jide n'aka na ịhọrọ agba ndị ị ga-ele anya kachasị mma. Maka ihe ndabere, ọ ga-ekwe omume iji oge elekere oji, isi awọ na agba aja aja. Mgbe nke ahụ gasị, ịnwere ike ịgbakwunye ọtụtụ ọkụ nke agba agba. Ngwa ndị ahụ ka na-enweghị ike ịgbagha, nke ụfọdụ na-egosi na ọ bụ karịa isi. Ihe ị na-ekwesịghị ịkọnye bụ akpa aka ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ. Enwere ike tie ihe eji eji ejiji na akwa T-shirt ka ị ghara ịjụ ka esi eji ejiji. Uwe kwesịrị ịnọgide na-enwe akara nke ọnụ ọgụgụ nna ya ukwu - iji mesie obi, ọkpọ, hips na ọkpụkpụ. Iji mesie uru na ihe nzochi zoro ezo bụ isi na isi ọrụ gị.
Olee otú ejiji ejiji ụmụ agbọghọ?
Ihe kachasị icheta bụ na akwa akwa ma ọ bụ na-agbanyeghị akwa ga-eme ka ọdịdị ahụ dịkwuo mma. Ihe ndị dị nro nwere ike ime ka ị nwee obi ụtọ, na volumetric - ihu na-agbakwunye ibu arọ. Achọla uwe dịka atụmatụ nke atụmatụ n'ọdịnihu, họrọ ihe ndị dabara gị ugbu a.
Olee otú ejiji ejiji na ego?
N'ihi ọdịda na agba nke ejiji, nke bụ ihe ndabere nke uwe ejiji, ị nwere ike ịjikọta ihe niile ngwa ngwa ma mepụta ihe ọhụụ ọhụrụ. Ego ego na-eji mma na akwa akpụkpọ ụkwụ, n'ihi na ha ga-ejere gị ozi karịa otu oge. Na-enye mmasị na kpochapụ. Nlekọta nke uwe dị oke mkpa, ọ ga-adị mgbe niile ka ọ dị ọcha ma dị ọcha.
Kedu ka eji eji ejiji maka ọrụ na ọfịs?
O doro anya na ọ dịghị otu ụkpụrụ, ma iwu ndị dị na ya adịghị: agbanyeghị olu dị elu, ọ bụghị onye ọ bụla ga-ahụ ya, ogologo nke uwe ya dị n'etiti ikpere, a ga-echezọ miniskirts, na uwe na-achachi anya bụkwa nhọrọ na-ekwesịghị ekwesị. Nye ohere maka ụdị ndị a na-ahụkarị na àgwà ndị nwere uche, nkwụsị nke ọma ma dị mma.
Olee otú ejiji ejiji maka oriri?
N'ebe a, ị ga-enwe ike ịziputa ihe ọzọ ka a tọhapụrụ gị ma na-akpali agụụ mmekọahụ, ma tụlee ụdị nnọkọ ị ga-aga na ndị ga-anọ. Maka ụlọ ọrụ ahụ ịhọrọ akwa uwe mgbakwasa, chefuo banyere ịdina. Maka ntụrụndụ nkịtị, ị nwere ike mesie ike niile dị na ọnụ ọgụgụ ahụ, họrọ akwa na-egbuke egbuke, uwe mmanya, jeans na n'elu, kwupụta echiche gị.
"Achọrọ m uwe ejiji, ma ebee ka m nwere ike eji ejiji na eji obi ụtọ?". Azịza nye ajụjụ a bụ mmasị nye ọtụtụ ụmụ nwanyị taa. Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụlọ ahịa na boutiques na-enye gị ohere ịnweta ọtụtụ ụdị na ụdị. Isi ihe iji kpachara anya na ahịa, ego dị ala na-adọta onye ọ bụla, ị nwere ike ịzụta ọtụtụ ihe na-enweghị isi. Zụrụ nanị ihe ịchọrọ na 100%. Ndụ anyị dịgasị iche iche ma anaghị eguzo. Ya mere, uwe kwesịrị ịdị iche, maka ọtụtụ ebumnuche.
Ulo ahia - akwa ejiji
Kedu ka ụmụaka ga-esi nọrọ ọdụ?
Mgbakasị mgbụsị akwụkwọ maka ụmụ agbọghọ
Uwe na okpu
Boho akpụkpọ ụkwụ
Kedu ihe ị ga-eji ejiji na nwa agbọghọ?
Ngwa maka akwa na-acha ọcha
Kedu ihe iji yi akpụkpọ ụkwụ ọcha?
Ahịa dị iche iche n'oge okpomọkụ
Kedu ụdị akpụkpọ ụkwụ na-eyi uwe ogologo?
Uwe ejiji ejiji maka ụmụ nwanyị
Achicha na mushrooms - 7 kacha mma Ezi ntụziaka maka delicious ero achịcha
Agbamakwụkwọ ejiji akwa
Kedu ihe ga-ewe nwa ahụ n'elu oké osimiri?
Ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ iko nke ogige ahụ
Esi ehicha anu?
Tincture nke propolis na mmiri ara - ngwa
Achicha "Pancho" - uzommeputa
Nwa ahụ anaghị agbanye n'ime ọnwa isii
Ebe nkiri Abrau-Durso
Kedu ka esi arịọ mgbaghara n'aka onye ị hụrụ n'anya?
Ascorbic acid n'ime ime
Ọgwụgwọ na agaric aga - iwu na ngwa maka ọgwụgwọ ọrịa dị iche iche
Yoghurt na thermos - uzommeputa
Ike na-eme n'ụlọ
Esi ewepu akwa?
Kedu otu esi emeghe cafe ụmụaka?
Riz mmanụ - bara uru na ụlọ na contraindications, Ezi ntụziaka
Salad na kabeeji na ham
Yist pancakes na mmiri
Salad Grik na kabeeji Pekinese